I-PVC yokuhlambela ilize
I-Veneer yokuhlambela ilize
Melamine lokuhlambela amampunge
Ilize yokuhlambela ilize
Basin emileyo Basin
Udonga lweHong Basin
Uyilo lwangasese lweKZOAO, olukhethekileyo kunye neNtsha
Amagumbi okuhlambela ahlukile ekhitshini, eyona ndawo ibaluleke kakhulu ekhaya. Ungayichazanga eyokuba ziyimfuneko ngokupheleleyo, zilungile kwaye zinesitayile. Amagumbi okuhlambela afanelekile kuyilo lwangoku lwasekhaya. I-KZOAO 2021 Uyilo lwekhabhinethi entsha, eyenziwe ngeplate yelitye, isikhokelo seshishini.
Umyalelo woKhathalelo lweKhabhinethi
ngomphathi ku 20-11-06
IKZOAO igumbi lokuhlambela lekhabhathi lenziwe ngebhodi yamasuntswana, i-MDF kunye nezinto zeplywood. Ukugcina ukusebenzisa ifenitshala ngokufanelekileyo, nceda ulandele le miyalelo ngononophelo ngaphambi kokuba uqale ngokufanelekileyo. Beka ifanitshala kumphezulu ethambileyo ukuthintela nawuphi na umonakalo ezifana scuffs okanye imikrwelo kwaye uhlole njengoko nasiphi na isiphoso ...
Xa ukhetha ibhafu yokuhlambela, yenze ibe yeyakho
Siyathemba ukuba uyayithanda imveliso esiyicebisayo! Zonke zikhethwe ngokuzimeleyo ngabahleli bethu. Ukuze uyazi, i-BuzzFeed inokuqokelela isabelo sentengiso okanye enye imbuyekezo kwiikhonkco ezikweli phepha ukuba uthatha isigqibo sokuthenga kubo. Owu, kunye ne-FYI-amaxabiso achanekile kunye nezinto ezikhoyo esitokisini njenge ...
Uluhlaza kanjani: kwigumbi lokuhlambela
Igumbi lokuhlambela ligumbi apho siqala khona kwaye siphela khona suku ngalunye, ngeendlela ezahlukeneyo zokucoca ezenzelwe ukusigcina sisempilweni. Ngokungaqhelekanga ke, ukuba igumbi apho sicoca khona amazinyo, ulusu kunye nayo yonke imizimba yethu (singasathethi ke ngokulahla inkunkuma) ihlala igcwele imichiza enetyhefu, kwaye, ...
Unantoni umbandela wei Yu? Yeyiphi indlela yokugcina u-Wei Yu enayo?
Yeyiphi indlela egcinwa nguWi Yu? 1, ekusebenziseni wonke umntu ukukhumbula ukuba igumbi lokuhlambela linesikhafu kufuneka lilungiswe ngexesha elifanelekileyo, ukuze siqhubeke nokusebenzisa. Sukuhamba ngasese emva kokuba kufakwe i-wei Yu, susa indawo yokufuna ukunxibelelana nabasebenzi abaziingcali. Sukusebenzisa izinto ezinzima ukubetha, ukubetha ...
Imveliso yeentsuku ezingama-500 ekhuselekileyo
ngomphathi ku 20-05-14
Kude kube namhlanje, i-taizhou kazhongao yococeko lokulawula ukhuseleko ekujolise kuyo lijolise ngokupheleleyo kwiintsuku ezingama-500 zeerekhodi ze-zoro, ezaphula ezona rekhodi zemveliso zikhuselekileyo. Sihlala sibambelela kwimigaqo yabantu -yipeyinti, sicebisa ukhuseleko umxholo wokuqala, siphucula ulwazi ngokhuseleko lwabasebenzi, sicebisa ukhuseleko ...
I-Taizhou kazhongao sanitary ware co ltd iya kubonisa iimveliso zethu zamva nje eKhitshini naseBath China, eShanghai, eza kubanjwa ngoJulayi 15 ukuya kuJulayi 17 2020, Idilesi: SHANGHAI ENTSHA iziko lemiboniso yamazwe aphesheya iBooth No: E5 B26 Inombolo yomnxeba: 1898652888
Biza e: 18958652888 okanye imeyile @: service@kzoao.com